AASraw သည် nandrolone decanoate အမှုန့်ထုတ်ကုန် - Steroid Raws ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
/ဘ‌‌လော့ခ်/"nandrolone decanoate" အတွက် category မော်ကွန်းတိုက်
Nandrolone phenylpropionate powde vs Nandrolone Decanoate အမှုန့်
၏ ရေးသားခဲ့သည် nandrolone decanoate, Nandrolone Phenylpropionate .
Nandrolone Decanoate အမှုန့် (Deca) ဆိုတာဘာလဲ။ Nandrolone Decanoate သည်အလွန်လူကြိုက်များသော anabolic steroid ဖြစ်ပြီး steroidal hormone Nandrolone ပါဝင်သော Decanoate ester နှင့်ဆက်စပ်သည်။ Nandrolone ဟော်မုန်းကို ၁၉၆၀ တွင်ပထမဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် Organon မှ Deca Durabolin အောက်တွင်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Nandrolone မြောက်မြားစွာ […]
၏ ရေးသားခဲ့သည် nandrolone decanoate .
Deca Durabolin ဟုခေါ်လေ့ရှိသော Deca သည် Nandrolone decanoate (C28H44O3) ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားခွန်အားနှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကြွက်သားများကြီးထွားခြင်းနှင့်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ တာ ၀ န်ရှိစွာအသုံးပြုသောအခါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်များကိုပေးသည်။ ကျယ်ပြန့်သောထိရောက်သောဆေးများကြောင့် […]